Fadlan Ha Ka Jawaabin Codsiga Baraha Bulshada Sidan | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 23, 2017 Jimco, Oktoobar 27, 2017 Douglas Karr
Mid ka mid ah barnaamijyada moobiillada aan ugu jeclahay ayaa ah Waze. Waxay iga fogeysaa taraafikada, waxay iga caawisaa inaan ka fogaado khataraha, waxayna iga digtaa booliska ka hor - waxay iga badbaadineysaa tikidhada xawaaraha ku socda haddii aan ahaan lahaa maalin riyood oo aan ku sii socdo xadka.
Waxaan ku jiray gaariga maalin dhaweyd waxaan go'aansaday inaan istaago meel sigaarka lagu iibiyo si aan hadiyad ugu qaato saaxiib, laakiin ma aanan hubin kuwa dhow. Natiijadu may ahayn mid aad u qurux badan… dukaan sigaarka lagu iibiyo oo 432 mayl u jira oo ku taxan “hareerahayga”. Marka, waxaan sameeyay wixii macmiil wanaagsan uu sameyn lahaa. Waxaan qaaday shaashad oo waxaan la wadaagay Waze.
.@waze runtii waxaad u maleyneysaa inaan u kaxeynayo 432 mayl sigaar? Uma maleynayo inay taasi tahay "hareerahayga". pic.twitter.com/lLBBppQQ
- Douglas Karr (@nacaybtire) October 20, 2017
Nasiib darrose, tani waa jawaabtii aan helay:
Oh maya! Waxaad ku soo gudbin kartaa warbixinta cayayaanka halkan: https://t.co/FnxjYba2tF
Taas oo aan isla markiiba ka jawaabey:
Kaliya halkan ayaan ka warbixiyay.
Dunta ayaa ku hakatay.
Ma hubo inta shirkadood ee tan sameeya, laakiin waxay u baahan tahay in la joojiyo. Haddii aad albaab ka siiso shirkaddaada adoo adeegsanaya warbaahinta bulshada macaamiishaada, waa inaad ka filaysaa inay arrimahaas uga warramaan habkaas, waana inaad dadka awood u siisaa inay ka jawaabaan.
1 ka mid ah 4 isticmaaleyaasha warbaahinta bulshada looga dacwooday baraha bulshada, oo 63% ay filayaan gargaar
Waxaan horey u qaatay daqiiqado yar maalinta kadib maxaa yeelay waxaan daryeelay tayada barnaamijka, uma socdo bog kale, waxaan buuxinayaa macluumaad farabadan, jawaabna waan sugi doonaa… waxaan kaa rabay inaad ogaato barnaamijkaaga ayaa loo jabiyay si aad u hagaajiso.
Jawaab weyn ayaa noqon laheyd Thanks @douglaskarr, waxaan arinta ugu warbixiyay kooxdayada horumarinta.
Tags: Adeegga macaamiishacodsiga adeegga macaamiishawarbaahinta bulshadaadeegga macaamiisha warbaahinta bulshadaWaze
Oktoobar 23, 2017 at 7:16 PM
Gabi ahaanba waan ogolahay. Waxaan sameeyay tan dhowr jeer, waxaanan helayaa jawaabta caadiga ah ee "ma buuxin kartaa warbixin cillad leh" ama "ma noo soo diri kartaa emailka X" - Aniguna waan uga jawaabay sidii aad adigu u jawaabtay oo kale.